မသိရင်ခက်မယ် Facebook Algorithm 2020 - Myanmar Web Designer (MWD) Co., Ltd.
Home » မသိရင်ခက်မယ် Facebook Algorithm 2020
Facebook Algorithm က 2009 ကစလို့ ပြောင်းလဲလာလိုက်တာ အခုဆိုရင် လုပ်ငန်းရှင်တွေကို အခက်တွေ့စေတဲ့အနေအထားတစ်ခုကို ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီ Content မှာ‌တော့
– Facebook Algorithm ဆိုတာဘာလဲ ?
-Algorithm အပြောင်းအလဲက Business တွေအတွက် ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေဖြစ်လာလဲ ?
– နောက်ဆုံး အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ Facebook Algorithm နဲ့ ဘယ်လိုယှဉ်ပြိုင်လုပ်ဆောင်ကြမလဲ? ဆိုတဲ့ အချက်သုံးချက်ကို ပြောပြပေးသွားမှာပါ ။
Facebook Algorithm ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ News Feed မှာ အဲ့ဒီလူရဲ့ အလေးထားမှုအပေါ်မူတည်ပြီး ဘာပြီးရင်ဘာလာမယ် ။ ဘယ်သူကိုတော့ ဘယ် ပိုစ့်ပြပေးမယ်ဆိုတဲ့ Content Presentation ကို ထိန်းချုပ်တဲ့ကောင်ပါ။
အလေးထားမှုကိုဘယ်လိုတိုင်းတာလဲဆိုရင် မိတ်ဆွေရဲ့ Account ထဲမှာ Friends Like Reactions Comment အသွားအပြန်အများဆုံးရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ Content တွေကို ပိုပြီးပြပေးပါတယ် ။ Nay Win Updated His Status. Ei Cho and Mg Hein added to their stories ဆိုတာတွေကို Noti Bell လေးမှာ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းနံမည်တွေနဲ့ ပေါ်လာတာ တွေ့ဖူးတယ်ဆိုရင် Social Network ရဲ့ ကိုယ်စားပြုမှုအတိုင်း ထိတွေ့မှု အများဆုံး မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ပိုပြီးချိတ်ဆက်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ။
Business Page တွေအတွက်ဆိုရင်လည်း Like မကြာခနလုပ်တဲ့ Pages တွေ ရှာဖွေမှုအများဆုံးလုပ်တဲ့ Pages တွေက လာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။
အတိအကျပြောရရင်တော့ Affinity Scores – ဒီ Page က Content တွေကို အရင်က Like လုပ်ခဲ့လား
Weight – Engagements ဘယ်လောက်ရှိလည်း ,
Time Scores – ဒီ Content မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာအချိန်ကုန်လည်း ,
Decay ( Photo လား Video လား Link လား) ဆိုတဲ့ Scores အချက်လေးခုနဲ့တိုင်းတာတာဖြစ်ပါတယ် ။
2019 နှောင်းပိုင်းက စလို့ မိတ်ဆွေတို့ ရဲ့ Page တွေမှာ Post တွေ Reach ကျလာတာကို သတိထားမိကြမှာပါ ။ 2019 နှောင်းပိုင်းက စပြီး Facebook က ပျမ်းမျှ ပိုစ့်တွေရဲ့ 2.2 % လောက် Reach ချခဲ့ပါတယ် ။
Brands တွေအနေနဲ့ Page မှာရှိတဲ့ Follower တွေရဲ့ 5.5 % လောက်ကို ပဲ ကိုယ့် ရဲ့ ပိုစ့်တွေပြနိုင်ပါတော့တယ် ။ 5.5 % က Average ဖြစ်ပြီး Followers များတွေ Page တွေအနေနဲ့ ဒီ % ထက်တောင် ဆိုးရွားနိုင်ပါသေးတယ် ။
တွက်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Follower 120,000 ရှိတဲ့ Page တစ်ခုရဲ့ အကောင်းဆုံး Reach ဟာ 6600 ဖြစ်ခဲ့မှာဖြစ်ပြီး ကျဆင်းမှုတွေက 6600 အောက်ဖြစ်သွားခဲ့မှာပါ။
ဒါကြောင့် သင်က Reach တွေကျလာတယ်လို့ သိသိသာသာခံစားရပြီဆိုရင် ဒါဟာ Facebook Algorithm အပြောင်းအလဲ ကြောင့် ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ချက်က Facebook ပေါ်က တစ်နေ့တစ်ခြားတိုးလာနေတဲ့ Business အရည်အတွက်ကြောင့်ပါ ။ သက်ရောက်မှုအနေနဲ့ နှစ်ခုပေါင်း Challenge ကို ရင်ဆိုင်ရချိန်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ Content ကို Audiences တွေဆီ ချမပြနိုင်တဲ့ Pages တွေဟာ Downranking ပါ ရှိတာမို့ 5.5 % ရဲ့ ဝေးရာအောက်ခြေနား ရောက်ကုန်ကြပါတော့တယ် ။
ဒါကြောင့် Organic Reach တွေ သေဆုံးသွားပြီလားလို့ မေးခွန်းတွေလည်း ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒီလို ကျဆင်းမှုတွေဖြစ်လာစေမယ့် Facebook ရဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေက ဘယ်တုန်းက စတင်ခဲ့တာလဲ ?
2004 ခုနှစ်ကို ပြန်သွားကြည့်လိုက်ရအောင်
2004 မှာ Facebook မွေးဖွားတယ် ။
2006 မှာ News Feed ကို စတင်မိတ်ဆက်တယ် ။
2007 မှာ Like Button ကို စတယ် ။
2009 မှာ Algorithm ကို စတင်ထည့်သွင်းတယ်။
◼ 2015 မှာ ကိုယ့်ကြည့်ချင်တဲ့ Page တွေကို မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုစေဖို့ See First Feature ကိုထည့်သွင်းခဲ့တယ် ။
တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ Organic Ads Post ( Boost မလုပ်ထားတဲ့ ကြော်ငြာစာသား Content ) တွေ ဆက်တိုက်တင်နေတဲ့ Page တွေကို Ranking လျှော့တယ် ။
◼ 2016 : Informative နဲ့ Entertainment နှစ်ချက်နဲ့အတူ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့ News feed တွေက Content တွေကို ဘယ် Content မှာ လူတွေအများဆုံး အချိန်ကုန်ကြသလဲ ဆိုတာကို စခွဲပြီ။
◼ 2017 : Like ထက် Reactions ပါတဲ့ ပိုစ့်တွေကို ပိုပြီး ဦးစားပေးပြီး ပြပြီ ။
◼ 2018 : Facebook က Business Post တွေထက် Friends and Family တွေရဲ့ Post တွေကို ပိုပြီးဦးစားပေးပြီးပြမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ် ။ Conversion ကို စတင်အလေးပေးလာပြီး Comment ရဖို့က အရေးပါလာတယ် ။ Like < Reactions < Comments ဆိုတဲ့ပုံစံ ဖြစ်လာတယ် ။ Engagement ပမာဏများတဲ့ Content တွေကို ဦးစားပေးလာတယ် ။
◼ 2019 : Engagement ရှာနိုင်တဲ့ False News တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်
◼ 2020 : Why Am I Seeing This Ads ထည့်သွင်းတယ် ။ User တွေက Page တစ်ခုက Ads တွေကို ထပ်မပေါ်တော့အောင် လုပ်နိုင်လာတယ် ။
Businesses တွေနဲ့ Marketers တွေအတွက် ဘယ်လိုခက်ခဲလာတာလဲ ?
▪ Reach က ချခံရပြီးသားမှာ Competitors တွေပိုများလာတာကို ရင်ဆိုင်လာရတယ် ။ Algorithm စခဲ့တဲ့ 2009 ခုနှစ်ကနေစပြီး အခု 2020 အထိ Post တစ်ခုရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေပိုမြင့်လာတယ်။ အရင်က Like and Share လောက်နဲ့ အဆင်ပြေပေမယ့် အခု Reactions တွေ Conversions တွေများလာအောင် ကြိုးစားလာကြရပါတယ် ။ နောက်ဆုံး Why Am I Seeing This Ads လက်ချက်မမိသွားအောင် ကြိုးစားလာရပါတယ် ။
– ချုပ်ရရင်တော့ Facebook ပေါ်က Brands တွေရင်ဆိုင်လာရတာက Algorithm ကို ကျော်လွှားနိုင်ရေး ဆိုတဲ့ ပြဿနာဖြစ်ပါတယ် ။
ဒါဆိုရင် Algorithmကို ဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲ ?
အားလုံးက Algorithm ကြောင့် အခက်တွေ့နေတယ်ဆိုရင် ကျော်လွှားနိုင်တဲ့ လူက အနိုင်ရသူဖြစ်မှာပါ ။ ဒီလိုအနိုင်ရသူဖြစ်ဖို့ဆိုရင် Algorithm ကို ကျော်လွှားနိုင်တဲ့သူတွေလုပ်ရမယ့် ( ၈) ချက်ကို လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် ။
ဒီ ( ၈ ) ချက်ကို သိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ ( https://bit.ly/3dLb6Vc ) Link အတိုင်းဝင်ရောက်ပြီး Comment Box မှာ MWD လို့ သွားရောက်ရေးသားရုံနဲ့ Messenger ကနေ စာလာပို့ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။
Algorithm ကို ကျော်လွှားနိုင်တဲ့ Business Man များ ၊ Marketers များ ၊ Brand များ ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ ။